နေ့: ဇန်နဝါရီလ 11, 2020
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် IETT ၏ဘတ်စ်ကား၊ Metrobus၊ ဥမင်နှင့်ရထားလမ်းများကခရီးသည်များကိုတရုတ်လူ ဦး ရေနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ မော်တော်ယာဉ်အစီးရေ ၆၀၀၀ ၂၇၄ ခုသည် ၁၈ သန်း ၄၉၈,၀၀၀ လည်ပတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလသည် ၆၂၉ ကြိမ်သွားမည်ဖြစ်သည် [ပို ... ]
Afyonkarahisar ရှိစီးပွားရေးသမား ayuayp Demirel သည် ၂၂ နှစ်အရွယ်အိပ်မက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထရပ်ကားကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အင်ဂျင်နှင့်ထုတ်လွှင့်မှု မှလွဲ၍ ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုအားလုံးနှင့်“ ကုလားအုတ်ကျောက်ရထားကုန်တင်ကား၊ တန် ၃၀ ဖြစ်သည် [ပို ... ]
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုထုတ်လုပ်သူများအသင်းUTİKADသည်သတင်းစာဆရာများနှင့်ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့တွင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ InterContinental Istanbul Hotel တွင်ကျင်းပသည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်UTİKADဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကChairman္ဌ Emre Eldener၊ [ပို ... ]
တူရကီ Enlarge Legrand ဂီယာရှိပါတယ်!
ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီကြီး Legrand Group မှလျှပ်စစ်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အခြေခံအဆောက်အဦများအတွက်ထုတ်ကုန်များနှင့်စနစ်များကိုဖွံ့ဖြိုးသောအဆောက်အဦ, တူရကီပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ဆက်လက်။ မကြာသေးမီကစီးပွားရေးအတက်အကျရှိနေသော်လည်း Inform စက်ရုံအသစ် [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan ကပြောကြားရာတွင် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အညီရထားလမ်းအသစ် ၅,၅၀၉ ကီလိုမီတာကိုပြီးစီးမည်ဖြစ်ပြီးရထားလမ်းအရှည်သည် ၁၇၅၂၅ ကီလိုမီတာအထိရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ မီးရထားလမ်းဖောက်လုပ်မှုနှုန်း [ပို ... ]
Channel ကိုနိုင်ငံတကာပြProbleနာများ၏ Istanbul Herald
Channel Istanbul အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, ရှေ့နေနှင့်သံအမတ် Att ။ Rzaza Türmenနှင့်အငြိမ်းစားနောက်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးTürkerErtürkကပြောကြားရာတွင်တည်ဆောက်မည့်လမ်းကြောင်းသည်နိုင်ငံတကာအဆင့်တွင်ပြproblemsနာအသစ်များသို့ ဦး တည်သွားလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ 1st Istanbul Metropolitan မြူနီစီပယ်ဥပဒေရေးရာအကြံပေး [ပို ... ]
Bursa မြို့တော်ဝန် Alinur Aktaş၊ ၁၀၀၀၀၀ Gürsu'nunသို့ချဉ်းကပ်လာသည့်လူ ဦး ရေသည်မကြာမီတွင်အရှိန်အဟုန်မြှင့ ်၍ Gürsuအတွက်အစီအစဉ်များက၎င်းတို့အနေနှင့်လည်းထိုအတိုင်းလုပ်ဆောင်သည်ဟုဆိုသည်။ Metropolitan Municipality မှမြို့တော်ဝန် Alinur Aktaşက“ [ပို ... ]
Channel Istanbul အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏နေ့လည်ခင်းအစည်းအဝေးတွင်ဘိုဂါဇီချီတက္ကသိုလ်မှဆရာ ၀ န်၊ Sabancıတက္ကသိုလ်ရာသီဥတုလေ့လာရေးညှိနှိုင်းရေးမှူးမှတင်ပြချက်ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ Ustan Sahin သည် Istanbul Channel Channel ၏စီမံကိန်းသဘောတူညီချက်နှင့်ဆန့်ကျင်နေသည်ဟုသူကပြောသည်။ [ပို ... ]
တက် 07.02.2020/XNUMX/XNUMX ယနေ့အထိတူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) အခြေချကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏သမ္မတနိုင်ငံအတူတကွလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းနှင့် Separation ဌာနခွဲများ၏လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာန၏ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသဆိုင်ရာရုံး (Haydarpasa-တူရကီ-Izmir-Sivas-Malatya နှင့် Adana Afyon) လူ့အတူ [ပို ... ]
TCDD ၏ရာထူးများတွင်ပွင့်လင်းစွာခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများထံမှလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများTaşımacılık A.Ş. လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ ၁) ကျန်းမာရေးဘုတ်အဖွဲ့အစီရင်ခံစာ (ပြည်နယ်ဆေးရုံများအားလုံး) [ပို ... ]
မကြာသေးမီကဖြစ်ပွားခဲ့သောနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးသည်ပြိုကွဲသွားသည့်ရုရှားနှင့်ရှေးဟောင်းသမိုင်းကြောင်းဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားဖြစ်လုပ်ဆောင်မှုများသည်အဆင့်မြင့်ညှိနှိုင်းမှုနှင့်ညှိနှိုင်းမှုများ၏ရလဒ်အနေဖြင့်ပုံမှန်အဆင့်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားသည်။ [ပို ... ]
Bursa Mudanya မီးရထားသမိုင်း
Bursa ၌မြန်နှုန်းမြင့်ရထားအတွက် 2016 ကိုကြေငြာခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ကိုပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ဆိုးကျိုးများကြောင့် Bursa ၏ရထားလမ်းသမိုင်းကြောင့်မြို့၏ရထားကိုခေတ္တရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရသည် [ပို ... ]
ယနေ့သမိုင်းတွင် - ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက် ၁၉၉၉ M11 Şişhane-Hacıosman Metro
ယနေ့တွင်သမိုင်းဇန်နဝါရီလ 11 1871 Plovdiv-Burgas လိုင်းအတွက်အတည်ပြုပြီးပါပြီ။ ဇန်နဝါရီလ 11 1999 M2 Şişhane - မီထရိုလိုင်းအတွက်Hacıosmanယာဉ်များဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုဒေါင်းလုဒ်။